Monster High Games (Monster High) - hilalao afaka amin'ny Lalao - Lalao
Online Games Monster Avo ho an'ny tovovavy.
Araka ny fomba fanao sy maimaim-poana amin'ny aterineto mampiseho lalao Monster Avo, milalao amin'ny biby goavam-be ny kilasy samy hafa dia tsy mampidi-doza toy izany. Solontenan'ny fanahy ratsy isan-karazany dia tsy ho hanaikitra anareo ireny, ka hitondra fahavoazana ho an'ny hafa - ankizy lian-dra vampira, werewolves, zombies, mummies sy ny ranomasina biby goavam-be nanapa-kevitra ny haka lalana hafa. Manana be dia be ny fialam-boly hafa, ka tsy afaka raiki-tahotra ny fahasalamana. Fa afaka minamana aminy, raha ny tolotra mpanao volo, ny akanjoko, manicure, manao ny orinasa nandritra ny matso ny toeram-pivarotana, na any amin'ny fandaharana ny an-tranony.
Dokotera mpanamory ambony ambony
Monster High Great Scarrier misaraka
Monster High Krismasy Party
Dokotera Mpanao dokotera
Natao teo amin'ny fomba iray kitapo Avo Monster
Monina Slumber Party Funny Faces
Ny Mr Draculaura Right
Hair Girl Hair Treatment
Monster Avo Girls: Spot zavatra
Monster High Frankie Stein Ampakarina
Monster Baby fiahiana
Monster High fandokoana
Biby goavam-be High: Adventure mpiandry miafina
Biby goavam-be High: Mahavariana kira
Biby goavam-be High: Teen FRECOM Fab - PHOTOSESSION
Biby goavam-be High: Flight sahona
Lalao Monster High tamin'ny Category:
Farany Online Games Monster Avo ho an'ny tovovavy.
Play ny lalao Monster Hae hanafaka azonao atao eo amin'ny tranonkala
Lalao Online Rehetra Monster High Games (Monster High)
Ny mahafatifaty biby goavam-be
Fa ny ankizivavy lehibe andro ho avy, amin'ny heviny hoe ny endri-tsoratra ny tantara an-tsary, ary animation andian lasa akaiky kokoa ho azy ireo. "Monster High School" - Amerikana animation namoaka andian-dahatsoratra tena firoboroboan'ny ka nahatonga ny fijery ny saribakoly sy ny lalao video. Izao no voalaza momba ny zanaky ny biby goavam-be malaza, fantatra ho antsika ho isan-karazany ny haisoratra asa, ary koa ny cinematic vokatra. Mahatsiravina mahatsiravina ankizy ray aman-dreny mbola tany am-pianarana, fa mitondra ny lohateny hoe hatao hoe tena nateraky ny ray aman-dreniny. Series andian-dahatsoratra stubby - iray sy tapany ny telo minitra, kanefa dia ampy amin'ny mazava ny sekoly izay foana ny olana mitranga mandritra ny zatovo ekipa, indrindra fa raha izany no izy tsy mahazatra.
Monster Avo Games-tserasera, izay natao mba hampahafantatra anao ny vaovao mahafatifaty Adventures ny litera iray hafa ho fomba iray miavaka mandany orinasa ao kelikely. Ireo izay efa nahavita ny hahita ny vanim-potoana rehetra ny nankafizin'ny olona cinematic vokatra, azo antoka fa hahatsiaro ny mahery fo ny Mpandray anjara sy ny endri-tsoratra. Fa raha misy ireo izay nandre voalohany dia olona maro be toy izany, izay tia ny fialam-boly mandany fotoana amin'izy ireo mandritra ny lalao Monster Hae maimaim-poana. Noho izany, mivory ny tanora mahafatifaty taranaka vaovao biby goavam-be, izay, na dia tsy mba toy mahatahotra toy ny ray aman-dreniny, nefa mbola Mivazivazy aminy Mila mitandrina:
Frankie Stein - zanakavavin'ny biby goavam-be noforonin'ny Dr. Frankenstein. Anisan'ireo mpianatra tanora izy, satria izy ihany no dimy ambin'ny folo andro taloha ela. Toy ny zava-nitranga ny fifandraisana azy saika teo, izy matetika ho sarotra taminy ny ao amin'ny orinasa, na ny toetry ny dia sariaka sy mahalala fomba.
Ny manaraka toetra amam-panahy - Drakulaura. TONGA dia fantatrao angamba, izy no zanakavavin'i Count Dracula sy ny 1600 taona. Tsy toa ny dadany, izy dia zava-maniry, ary tsy hisotro ny ra, fa ny masoandro tsy tia azy, satria izy no voatery niafina ambany elo. Ny fifikiran'izy ireo foto-piandohany, dia aleony foana ho toy ny biby ramanavy, izay nataony hoe - Count lehibe.
Rehefa hahalala Claudie Wolf - zanakavavin'ny werewolf. Izy no tena Mpanadala lehilahy sy ny fashionista izay mifantoka foana stylish ary na dia manaitra. Ny taona - dimy ambin'ny folo taona, tia loko volamena sy ny sipany Drakulauru sy malala Kitty atao hoe - Crescent.
Claudie dia mitovy taona ho toy ny zanakavavin'i biby goavam-be any an-dranomasina - ny Blue Lagoon. Dia tonga tany Amerika avy any Aostralia amin'ny fandaharana amin'ny fifanakalozana mpianatra. Ao ny fitondran-tena nanasongadina ny fitsaratsaram-poana rehetra, izay manome Aostraliana Amerikana. Lagoon ity Misokatra ho an'ny fifanakalozan-kevitra, ka maro no atleta, fa toy ny biby piranha tao amin'ny Neptune.
koa nahalala Cleo de Nile - ny zanakavavin'ny Neny a, izay indray mandeha Ramses de Neily, ary nitondra Ejipta. Cleo mihoatra ny dimy arivo taona, ary ny zokiny indrindra dia eo amin'ny mpianatra hafa. Zava-malaza, na dia ny toetra amam-panahy somary masiaka. Ny fifikiran'izy ireo ny tenany, de Neily dia nahazo vipera, izay atao hoe Hizett.
Dia araka izany orinasa mihantona Gulia Yelps - zanakavavy Zombies. Na dia eo aza ny zava-misy fa ny teny dia ahitana ny fimàmàn'ny sy hitoloko feo, dia iray amin'ireo tsara indrindra mpianatra ao an-tsekoly, mpampianatra sy ny namany mikapoka ny mahery tsaina. Na dia toy ny biby, dia nifidy ny vorondolo - ny vorona izay mariky ny fahendrena, ary ny anarany nataony hoe - Sir Uh-Uh-be.
Koa satria mahalala ny tena mpisehatra, ianao sary an-tsaina mora orinasa izany rehetra izany miaraka. Na dia tsy nahita ny andiany teo aloha, dia afaka mora foana hahafantatra tsirairay mahery fo sy ny fahazarana fotsiny ny lalao Monster nihazakazaka Hae maimaim-poana. Ao amin'ny toy izany mahafinaritra ny fiaraha-monina dia voatery tsy ampy amin'ny lohahevitra ny lamaody. Izay lamaody ny fitafiana, ka niaraka fiovana. Koa satria ny endri-tsoratra rehetra dia mpikambana ao amin'ny karazana biby goavam-be, sy ny safidy ny fomba fitafiana ho azy ireo dia ho hafa. Haka azy tsara tarehy swimwear, mazava tampon sy zipo, blouses sy ny palitao tsara tarehy, dia aza adino ny kiraro, izay aseho ao ihany koa isan-karazany eo amin'ny fitafiana ny vehivavy.
Miroboka ao anatin 'izao tontolo izao ny biby goavam-be milalao lalao Monster Hai
Lalao ho an'ny ankizivavy Avo Monster tolotra mba milalao mahafinaritra azy ireo amin'ny fanatanjahan-tena izay tsy maintsy any amin'ny sekoly fandaharam-pianarana. Rehefa miaraka amin 'ny tovovavy, biby no milalao baskety, mitaingina ny onja eo ny onjan-dranomasina, ary ho fanohanana ekipa lehibe ho an'ny baolina kitra ny sekoly Club. Taorian'ny fiofanana toy izany mavitrika azo misavorovoro volo sy makiazy nohosorana. Mba indray-freshen izy, aoka ny Aza kivy ao ny lalao ho an'ny zazavavy Monster Hai, izay ianao dia ho afaka hahazo indray ny mendrika fijery. Any amin'ny mpanety zazavavy rehetra dia hanohy indray ny volon-dohany, izay raiki-tampisaka amin'ny maha, fa ao amin'ny hatsaran-tarehy fivarotana ho hitanao ny faritra, ny loko manontolo ho make-up, izay manamafy ny fomba manokana. Ao amin'ny fampianarana atrikasa ireo dia afaka foana hiomana ho amin'ny fankalazana ny malala indrindra ny biby goavam-be rehetra - Happy Halloween. Mba hankalaza azy io, dia ilaina ny mifidy tsara ny akanjo sy ny sisa amin'ny kilan'ny.
ary koa ny mahazatra ankizivavy ao amin'ny tafika ihany koa ny solontenan'ny otherworldly manana fety fitsingerenan'ny andro nahaterahana, ka hanasa ny namany ho amin'ny andro firavoravoana, nanompo ny latabatra, ny fandihizana. Mba hiomanana ho amin'ny manaraka hahazoam-miaraka, Ampianaro ny sasany dihy vaovao hetsika miaraka amin'ny vehivavy sakaizany ary manampy azy ireo mba hanendasany mofo matsiro. Araho ny manosika, dia tsy maintsy mamorona ny fototry ny koba, ary avy eo dia mofo ao amin'ny mofomamy Yummy ataovy izay rehetra dia zarao amin'ny vahiny. Rehefa ny vahiny dia hampihahaka ny tranony, tsy maintsy hanaisotra izay rehetra indray ny trano mamirapiratra amin'ny fahadiovana. Sasao fanaka rehetra, manala potipoti-javatra, manangona fako, handringana latabatra dia sasao ny tany. Rehefa vita ny asa, dia afaka mandeha any amin'ny lalao Avo Monster Action ny orinasa tsara indrindra sakaizany tsy sendra nanao dia teny an-dalana, ary hanangona ny vola madinika rehetra. Ianao no miandry ny tena fitsapana ho amin'ny fandringanana ny trondro-biby goavam-be sy ny fandrika. Mba hitoetra simba, miezaka ny ho fiheverana sy Monster Avo lalao an-tserasera mihoatra ny indray mandeha no faly anao amin'ny fahafahana vaovao.